घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू Jude Bellingham बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
जुड बेलिंगहमको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, नेट वर्थ, जीवनशैली, र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा, हामी तपाईंलाई अंग्रेजी फुटबलरको एक पूर्ण जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दछौं, शुरुको दिनदेखि, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईंको भोक मेटाउन, फोटोहरूमा जुड बेल्लिंगहमको बायोको सारांश हेर्नुहोस्। यो एक कथा सही बताउँछ?…
एक शक बिना, मार्ग Dortmund युवा खिलाडी एकीकृत लगभग अतुलनीय छ। फेरि, तपाइँ र मलाई थाहा छ कि जुड इ England्ल्यान्डबाट आएका एक महान बच्चा हो जसले यसका पाइला पछ्यायो Jadon Sancho - जर्मनी मा आफ्नो लागि नाम बनाउँदै।
प्रशंसकको बावजुद, हामी बुझ्छौं कि धेरै जनाले उनको पूर्ण जीवन कहानी पढेका छैनन्। यो दुबै कथाहरू द्वारा भरिएको छ जुन दुबै रमाईलो र मनपर्दो छ। थप विज्ञापन बिना, हामी सुरुको वर्षको कथाबाट सुरु गरौं।
जुड बेलिंगहम बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ 'जुड बल'। जुड भिक्टर विलियम बेलिंगहम जून २०० 29 को २ th तारिखमा उनको आमा, डेनिस बेलिंगहम र बुबा, मार्क बेलिंगहम (एक पुलिस अफिसर) मा इ England्गल्यान्डको स्टोरब्रिजको बजार सहरमा जन्मेका थिए।
वेस्ट मिडल्याण्ड्स नेटिभ उसका आमा बुबा बीचको मिलनबाट जन्मेका दुई छोरामध्ये जेठो हो। तलको फोटोमा, म तपाईंलाई शर्त गर्दछु कि तपाईं उहाँमा जुड बेलिंगहमकी आमाको अनुहार र छाला टोन प्रतिबिम्ब देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रश्न बिना, डेनिस परिवार मा प्रमुख जीन अधिकार छ।
जुड बेलिंगहमका बाबुआमालाई भेट्नुहोस् - उनका बुबा, मार्क बेलिंगहम र एक जस्तो आमा (डेनिस)।
जुड बेलिंगहम बढ्दो वर्ष:
अ player्ग्रेजी खेलाडीले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू आफ्नो कान्छो भाई जोबे बेलिंगहमसँग इ England्ल्यान्डको मध्य भागमा बिताए। त्यसबेला, यहूदा धेरैले एक होनहार केटाको रूपमा देखेका थिए - एक आज्ञाकारी बच्चा जसले (प्रारम्भिक) जीवनमा उसले के चाहान्छ भनेर चिनिन्छ।
केटाको रूपमा, मार्कका बुबाले उनलाई उनका गैर-लिग फुटबल खेलाडीका रूपमा दिनहरूको कथा सुनाए जहाँ उनले 700०० भन्दा बढी गोलहरू गरे। साथै, कसरी उसले यसलाई ठूलो लीगमा बनाउन सकेन। पछिल्लालाई सच्याउनको लागि, सानो जुडले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन फुटबलमा समर्पण गर्ने वाचा गरे। यसले उनको तल्लोमण्डलको स्थापना दिनहरू देख्यो जुन हामी उसको बायोको उत्तरार्धमा वर्णन गर्ने छौं।
जुड बेलिंगहम परिवार पृष्ठभूमि:
जहाँसम्म हामी भन्न सक्दछौं, उहाँ एक परिवारबाट आउनुहुन्छ जुन आर्थिक सन्तुलित छ। जुड बेलिंगहमका बुबा (मार्क) - जो वेस्ट मिडल्याण्ड्समा पुलिस सर्जेन्टको रूपमा कार्यरत छन् र पूर्ण-समय अ English्ग्रेजी कर्मचारीभन्दा दुई गुणा कमाउँछन्।
अर्कोतर्फ जुड बेलिंगहमको आमा (डेनिस) पनि इ England्ल्याण्डका श्रमिक-वर्गका नागरिक हुन्। तसर्थ, यो स्पष्ट छ कि ऊ एक मध्यम मध्यम-वर्ग परिवार पृष्ठभूमिमा हुर्किएको छ, कुनै आर्थिक चिन्ता बिना।
जुड बेलिंगहम परिवार मूल:
उनको जन्मस्थानको आधारमा, युवा मिडफिल्डर इ England्ल्यान्डको पश्चिमी क्षेत्रका हुन् - वेल्सको धेरै नजिक छ। फेरि तपाईंले याद गर्नु भएको छ ... उसको शारीरिक उपस्थितिमा हेराईले तपाईंलाई उसको मातृ जरा अनुमान लगाउँदछ जुन यूरोपको सिमाना बाहिर जान्छ।
सत्य यो हो कि जुड बेलिंगहमको परिवार मूल अंग्रेजी र अफ्रिकी मूल हो। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि जवान केटोले आफ्नी आमाको पुर्खा मार्फत आफ्नो अफ्रिकी जातीयता पाउनु पर्छ।
जुड बेलिंगहम अनटल्ड क्यारियर कहानी:
जुडको फुटबल कथाहरूको शुरुआत जब उहाँ छ वर्षको गर्नुभयो। यो त्यस्तो समय हो जब उनले ब्लूजलाई समर्थन गर्न थाले - बर्मिंघम सिटी एफसीको उपनाम। त्यस बेला, बेलिंगहम क्लबमा मनपराउँथ्यो जुन उसको नामसँग मिल्दोजुल्दो छ। उनीसँग विरासतमा आउने उत्कट इच्छा र परिवारको सपनाहरू बाँच्नका लागि क्लबको एकेडेमीमा सम्मिलित हुने ठूलो आशा थियो।
शिक्षा र एकेडेमी प्रविष्टि:
अनिवार्य रूपमा, उनका आमा बुबाले सुनिश्चित गर्नुभयो कि उहाँ स्कूल जानुभएको छ। एजब्यास्टनको प्राइरी स्कूलमा पढ्दै गर्दा, बेलिंगहमका बुबाले उनलाई बर्मिंघम सिटीको अण्डर team टीममा भर्ना गराए। उसको अनुहारको हेराईबाट तपाईले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। यो एकेडेमी परीक्षण पास गर्ने अनुभूति थियो - उसको सबैभन्दा ठूलो बचपनको क्षणहरू।
बस अर्को वेस्ट मिडल्याण्ड्स जन्मे खेलाडी जस्तै - डैनियल स्ट्रिज - बेलिंगहमले आफ्नो बुबाबाट धेरै कोचिंग पाठ प्राप्त गरे।
जुर्म बेलिंगहमको बर्मिंघम शहरको प्रारम्भिक जीवन:
ब्लूजमा, उनले आफ्ना साथीहरू भन्दा अतुलनीय फुटबल शक्ति प्रदर्शन गरे। उल्का सुधारको साथ, यहूदाले गर्न नसक्ने कुराको अन्त्य थिएन। उसको क्षमताले उसको प्रशिक्षकको विश्वास जित्यो र उसलाई क्रमशः १ and र १ 18 वर्षको उमेरमा बर्मिंघमको यू -१ and र यु -२ 23 टीममा द्रुत पदोन्नति गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्यो।
चाँडै, युवा अंग्रेजी खेलाडी को रूप मा भाग्यशाली भयो डेमराई ग्रे र जुलाई २०१ July मा बर्मिंघम सिटीको साथ दुई वर्षको छात्रवृत्ति लिए। अन्ततः हरेक युवाको सपनाको क्षण आयो। जुड बेलिंगहमका आमाबुवा र परिवारका सदस्यहरू आफैंले १ years बर्ष र 2019 days दिन मा एक वरिष्ठ अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरेकोमा गर्व गर्थे।
जुड बेलिंगहमको जीवनी- फेम कहानीको लागि रोड:
जीवनको नयाँ अध्यायमा लाग्दै, ती जवानले रेकर्ड तोड्न शुरू गरे। पहिलो, जुड १ 16 बर्ष र days 63 दिनको उमेरमा बर्मिंघमको सबैभन्दा कान्छो गोल स्कोरर बने। उहाँको जीवनको यस घडीमा, धेरै प्रतिष्ठित टोलीहरू - विशेष गरी म्यान युनाइटेड - उनको हस्ताक्षरको लागि भीख माग्न आएका थिए।
कुरा सही हुनको लागि, जुड बेल्लिंगहमका आमा बुबाले धेरै सोचविचार गरे - यदि संयुक्त तिनीहरूको छोराको लागि सही हो भने। धेरै समीक्षा पछि, तिनीहरूले रेड डेभिलको २० मिलियन डलरको स्थानान्तरण सम्झौता अस्वीकार गरे। स्पष्टताको लागि, बेलिंगहम पछि उनले म्यानचेस्टर युनाइटेड स्नुब किन भने.
जुड बेलिंगहम सफलता कहानी:
केहीको पाइला पछ्याउँदै अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू जसले यो विदेशमा बनाएको छ, उसले इ England्ल्याण्ड बाहिर सम्झौता प्रस्तावहरूको सम्मान गर्न सुरु गर्यो। सबै क्लबहरू मध्ये, डार्टमंडले उच्च रेटेड अंग्रेजी किशोरकिशोरीमा हस्ताक्षर गरे।
भाग्यको स्पष्ट कललाई जवाफ दिँदै, बेलिंगहम सामेल भए ईरलिंग हालान्ड Dortmund मा million २ million लाख को रिपोर्ट को लागी शुल्क को लागी। स्थानान्तरणको साथ, उनी फुटबलको इतिहासमा सब भन्दा महँगो १ year बर्षको भए।
रोचक कुरा डोर्टमन्डको साथ, उसले तल झर्ने कुनै संकेत देखाएन र बढ्दै र बढ्दै गयो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… जुड बेलिंगहम डेब्यू गोलको साथ बोरसिया डार्टमन्डको कान्छो स्कोरकर्ता भए। यस उपलब्धीले उनलाई युरोपको सबैभन्दा चर्चित किशोर सम्पत्तिमध्ये एक भएको देख्यो।
नबिर्सनुहोस्, उसले एउटा रेकर्ड तोड्यो फिल फडन सबैभन्दा कान्छो अ player्ग्रेजी खेलाडीको रूपमा एउटा चैम्पियन्स लिग म्याच सुरु गर्न। धेरै कलिलो उमेरमा उनका उपलब्धिहरू देखेर, गेरैथ साउथेट युवालाई इ senior्ल्यान्डको लागि वरिष्ठ पदार्पणका लागि आमन्त्रित गर्नमा समय खेर फालियो। बाँकी, हामी उसको भिडियो हाइलाइटको रूपमा भन्छौं, अब इतिहास हो।
जुड बेलिंगहम प्रेमिका / पत्नी को हुन?
तुलनात्मक रूपमा जवान हुनु र उसको क्यारियर सफलतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै किन उनले आफ्नो प्रेम जीवनलाई कम ध्यान दिएका छन् भनेर वर्णन गर्दछ। कुनै श doubts्का छैन, त्यहाँ सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीहरु छन् जो उसको कालो सुन्दर देखिन्छन्।
धेरै अनुसन्धान पछि, हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि जुड बेलिंगहमका बाबुआमा (लेखनको समयमा) ले उसलाई प्रेमिकाको अनुमति दिएनन्। आफ्नो परिवारको जीवन सेक्सनमा यो अधिक।
जुड बेलिंगहम व्यक्तिगत जीवन:
फुटबलरको रूपमा उसको जागिरबाट टाढा, उसको व्यक्तित्व बुझ्दा तपाईंले राम्ररी चिन्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला, जुड एक शान्त, कोमल र प्रकृतिमा एक अन्तर्मुखीको बढी हो। दोस्रो, ऊ सायद खाने छ र पकाउने मनपर्दैन। जुड सबै भान्छाको कामका लागि उनको आमामा भर पर्छ।
एक इंट्रोवर्टको जस्तो व्यवहारले उसलाई विशेष गरी साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूमा हास्यको ठूलो भावना प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्धित गर्दैन। वास्तवमा भन्ने हो भने, बेलिंगहम कहिले काँही आफ्ना साथीहरूलाई हँसी बनाउँदछ कमेडी उसको काम नभए पनि। विडम्बनाको कुरा, उहाँ एक हास्यास्पद गायक हुनुहुन्छ, जस्तो कि तपाईं तलको भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ।
डोर्टमुन्डमा सरुन्जेलसम्म यहूदा बेलिंगहमका बाबुआमाले उनीहरूको छोरालाई उनको नजिकको परिवारसँगै घरमा बस्न दिए। जे होस्, जर्मन पक्षमा सामेल भएपछि उनले आफ्नै घर र एउटा विदेशी कार प्राप्त गरे।
उसको आम्दानीको विश्लेषण गर्दा हामीले पत्ता लगायौं कि बेलिंगम डार्टमन्डको साथ साप्ताहिक तलब € .,००० डलर कमाउँछ। के तपाईंलाई थाहा छ?… बर्मिंघम शहरमा उसको कमाई बदाम थियो - १£57,000 डलर मात्र। धन्यबाद, BVB को ठेक्काले सकारात्मक रूपमा उसको तलबलाई असर गरेको छ र नाटकीय रूपमा उसको कुल सम्पत्ति बढाएको छ जुन अहिले २ देखि million मिलियन पाउन्ड (२०२० तथ्या .्क) बीचमा छ।
जुड बेलिंगहम पारिवारिक जीवन तथ्यहरू:
नौजवानको लागि स्टारडम जाने बाटो उसको छेउछाउको घरानाको सहयोगबिना कहिल्यै सजिलो हुँदैन। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई यहूदा बेल्लिंगहमको परिवारको बारेमा उसको बुवाबाट शुरू हुने बारेमा थप सत्यता प्रस्तुत गर्दछौं।
यहूदा बेल्लिंगहमका पिताको बारेमा तथ्यहरू:
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभयो कि उसले कहाँबाट उसको फुटबलको स्पर्श पायो? ठिक छ, यहाँ सत्य छ; बेलिंगहमको प्रतिभा स्पष्ट रूपमा उसको बुवा मार्क बेल्लिंगहमबाट प्राप्त भएको थियो। पुलिस बलमा भर्ती हुनु र काममा प्रवेश गरे पछाडि मार्कले आफ्नो परिवारलाई चालीस वर्षसम्म गरिरहन फुटबल खेले।
त्यतिखेर, मार्कको अद्वितीय गोल-स्कोरिंग क्षमताले धेरै गैर-लीग रक्षकहरू आफ्नो उपस्थिति देखेर थरथर काम्थे। उसको गैर-लीग क्यारियर भरि, बेल्लिंगहमका बुबाले 700०० भन्दा बढी गोल गरे। दुःखको कुरा, उनले यसलाई कहिल्यै गैर-लीगबाट टाढा बनाएनन् जेमी वर्डी गर्नुभयो।
यहूदा बेल्लिंगहमको आमाको बारेमा तथ्यहरू:
जुड भान्साकोठामा भर्खरै नौजवान भएकोले, डेनिसको उनको आमाले ड Englandर्टमुन्डमा आफ्नो छोरोसँग अपार्टमेन्ट बाँड्न इ England्ल्यान्ड छाड्न सहमत भए। जबकि मार्कले आफ्नो छोराको राम्रो सम्झौताको सुनिश्चितता गरेकी छिन्, जुडलाई घरमा केहि पनि नहुने कुराको सुनिश्चित गर्दै उनी होमकेयर गर्छिन्।
ती दिनहरू, डेनिसले जुड र जोबेको राम्रो देखभाल गरे जब उनका पति मिडल्याण्ड्समा कानून लागू गर्न व्यस्त हुन्छन्। हेर, एक जस्तै आमा र छोरा।
जुड बेलिंगम भाइको बारेमा तथ्य:
इ England्ल्यान्डका फुटबलरले आफ्नो कान्छो भाई जोबेसँग धेरै नजिकको बन्धन साझेदारी गरेका छन्। यी दुई भाइबहिनी उनीहरूका अभिभावकको अभिभावकको रूपमा हुर्केका थिए र दुबै बर्मिंघम सिटी एफसीको एकेडेमीमा भर्ना भए। बेलिंगहामको भाई अझै फुटबल खेल्छ र रोल मोडेलको रूपमा उसको ठूलो भाई देख्छ।
हुनसक्छ, यदि जवान विger्गरकी एउटी बहिनी थिइन भने, उनी पनि आफ्ना भाइबहिनीहरूसँग उनीहरूको फुटबल अभियानमा सामेल हुन सक्छिन्। यद्यपि, हामी आशा गर्दछौं कि युवा जोबेको क्यारियर उनका बुबा (मार्क) भन्दा बढी छ।
जुड बेलिंगहमका आफन्तहरूका बारे:
उनको ब्रिटिश-कालो जातीयताको कुरा गर्नु विशेष गरी उनका हजुरबा हजुरआमा हजुरआमालाई बेवास्ता गरेको पानीमा डुब्नु बराबर हो। यस समयमा, आफ्नो काका, काकी, ग्रानिजहरू आदि बारे कुनै जानकारी छैन।
जुड बेलिंगहम अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो जीवन कथा अंग्रेजमा लपेट्नको लागि, यहाँ केहि वास्तविकताहरू छन् जुन तपाईंलाई पूर्ण रूपमा उसको जीवनी बुझ्न सक्दछ।
तथ्य # १: सेवानिवृत्त जर्सी नम्बर:
जब उनी बर्मिंघम शहरमा आफ्नो वरिष्ठ क्यारियरको लागि भर्ना भए, जुडलाई टीमको जर्सी नम्बर २२ दिइयो। किनभने उनी राम्रो थिए, क्लबले उनलाई सम्मान गर्ने नाममा उसको जर्सी नम्बर रिटायर गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो जो प्रशंसकहरु संग राम्रो तल गएन बर्मिंघम एफसी तिनीहरूको जर्सी संख्या रिटायर्ड को लागी भुनीmber 22 केटाको लागि जसले भर्खर 44 XNUMX खेलहरू खेलेका थिए।
यो ज्यादै अविश्वसनीय छ कि उसको ज्यालाले केहि सय पाउन्डबाट हप्तामा €€,००० डलर लिन थाल्यो। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि औसत अंग्रेजले डेढ बर्षसम्म काम गर्नुपर्नेछ किन कि बेलिंगहमले एक हप्तामा कमाउँछ।
यूरोमा ज्याला (€)
हामीले रणनीतिक हिसाबले उसको बेलिंगहमको कमाईको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै बनाउनुभएको छ हेर्नुहोस्।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो जुड बेलिंगहमको बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: गनरको हराएको अवसर:
के तपाईंलाई थाहा छ? ... उत्तरी लन्डन क्लब किशोर कल्पित मानिसहरुलाई चिच्याउने पहिलो क्लब थियो। आर्सेनल जुड बेलिंगहममा हस्ताक्षर गर्न सबैभन्दा नजिक आए तर तिनीहरूको व्यवस्थापनमा संक्रमणका कारण हरायो।
तथ्य # १: राम्रो FIFA सम्भावित, कमजोर वर्तमान रेटिंग:
उसको कान्छो उमेरको बावजुद, बेलिंगहमले गुणहरू देखायो जुन उनलाई आफ्ना साथीहरू बीचमा उच्च स्थान दियो। उसको प्रोफाइलबाट हामी देख्न सक्छौं कि प्रोमिसन खेलाडीले आफ्नो बाहुलामा बढी सम्भाव्यता प्राप्त गरेको छ। दुर्भाग्यवस, उसको वर्तमान रेटिंग ग्रस्त छ - केवल points बिन्दुहरू तल सेन लन्स्टस्टफ.
निष्कर्षमा हामी यो तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौं कि जुड बेलिंगहमलाई बाल्यकालदेखि उहाँ के चाहानुहुन्छ थाँहा थियो। मनपर्‍यो निक पोपउसले तल्लो लिगबाट खेल्दा आफ्नो बाँकी भुक्तानी गरेको छ र त्यसपछि शीर्ष तहमा।
थप रूपमा, त्यो जानेर बोरुसिया डार्टमन्ड उनको लागि सब भन्दा राम्रो स्थान थियो यदि सम्भव भएन भने पारिवारिक मानहरु को लागी। जुड बेलिंगहमका बाबुआमा (मार्क र डेनिस) आफ्नो जीवनको हरेक महत्त्वपूर्ण घडीमा आएका छन्। उनीहरूलाई धन्यबाद, उनी लाभदायक निर्णय गर्न सक्षम थिए जसले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्‍यो।
Jude Bellingham को जीवनी पढ्न को लागी धन्यबाद। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँ यस लेख को लागी केहि गलत भेटियो भने। अन्यथा, टिप्पणी सेक्सनमा मिडफिल्डरको कथाको बारेमा तपाईंको बिचार बताउनुहोस्। अब यहूद बेलिंगहमको बायो को पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: जुड भिक्टर विलियम बेलिंगहम
निक नाम: जुड बेलिंगहम
जन्म मिति: XNUM Xth 29
जन्मस्थान: स्टौरब्रिज, वेस्ट मिडल्याण्ड्स, इ England्ग्ल्यान्ड
अभिभावक: श्री र श्रीमती मार्क बेलिंगहम
Siblings: जोबे बेलिंगहम (भाई)
नेट मूल्य: To २ देखि million million मिलियन (२०२० तथ्या )्क)
वार्षिक वेतन: Million3लाख